Hazakazaky Ny Mpiaro Tontolo Iainana Eto Madagasikara Handringanana Radàka Misy Poizina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2016 8:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, 日本語, English
Photo by EOL. CC-BY-NC-SA 2.0
Ity lahatsoratr'i Edward Carver ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Ensia.com, gazetiboky iray manasongadina ireo vahaoloana ara-tontolo iainana iraisampirenena anaty hetsika, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tany amin'ny fiandohan'ny taona 2014 tany ho any, niara-niasa tamin'ny vondrona mpanao fikarohana amin'ny biby an-tanety sady an-drano teto Madagasikara i Jonathan Kolby, biôlôjista, raha naharay mailaka nahatalanjona avy amin'ny lehilahy iray mipetraka ivelan'i Toamasina, seranan-tsambo lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Nopaingoriny tao ny sarin'ny sahona miloko volontany mbola tsy hita teto amin'ity nosy manankarena zavamananaina ity mihitsy hatramin'izay. Noho ny fahalianan'ny mpanao fikarohana dia hitan'ireo ny tranon'ilay lehilahy, izay mifanakaiky indrindra amin'ny toby fanadiovana nikela, saingy tsy nihevitra ny hahita ilay sahona na ilay radàka araka ny fiteny any ry zareo. Nanome antoka azy ireo ilay lehilahy fa tsy olana izany. “Mahandrasa folo minitra,” hoy izy.
Fotoana fohy taorian'izany, rehefa nilentika ny masoandro, nivoaka teo ivelany ry zareo ary nahita sahona aziatika na radàka aziatika dimy aman'enina teo ho eo. “Ngeza, matavy mamelona olon-dehibe,” hoy ny fampahatsiahivan'i Kolby, haka ny mari-pahaizana Ph.D.mianatra ny aretin'ny biby an-drano sady an-tanety ao amin'ny Oniversite James Cook ao Aostralia. “Tahaka ny niteny izahay hoe, ‘Tay be, ratsy izy izany.’”
Nandeha ny roa taona, toy izao hatrany ny marimaritra iraisan'ireo siantifika. Manimba ny rafi-piainan'ny zavamananaina eto Madagasikara ity radàka vaventy misy poizina avy any Azia atsimo-atsinanana, Duttaphrynus melanostictus, izay mampidi-doza ny fiainan'ny biby tsy manam-paharoa misy eto amin'ny firenena ary mandrahona ny vahoaka ao aminy. Mety mahafaty biby, eny fa hatramin'ny kilonga aza, ny poizina avy amin'ny hoditr'ity radàka ity. Raha mbola mitohy ny fielezany, dia mety hanohintohina tanteraka ireo karazan-gidro sy fosa ahafantarana indrindra ny nosy ireto radàka ireo, biby efa voarahona amin'ny fahaverezan'ny fonenany indrindra anefa.
Ankehitriny miantso amin'ny hanaovana ezaka fandringanana haingana ity radàka mora mitombo isa vetivety ity ny vondrona manampahaizana manokana momba ny biby sady an-drano no an-tanety sy ireo karazam-biby manohintohina sy ny radàka mba tsy ho tara loatra izany. Ity no mety ho fikasana goavana indrindra tsy mbola natao tamin'ireo bibin-drano sady an-tanety mandreraka ireo hatramin'izay amin'ny tokony hamonoana radàka hatramin'ny 4 tapitrisa any ho any. Mety hitentina hatrany amin'ny roa tapitrisa dolara amerikana ka hatramin'ny folo tapitrisa dolara izany fanentanana izany, vola tsy ananan'ny manampahaizana. Niantso vonjy tamin'ny orinasam-pitrandrahana izay mety ho lalan'ilay fananiham-bohitra ny sambo mpitondra ny fiatibeny (kaontenera) ry zareo, saingy tsy nanaiky hatramin'izao ilay orinasa — raha mora niarahana niasa sy nanampy tokoa rehefa nahafantatra fa miteraka olana ity radàka ity, milaza ny tsy fisian'ny porofo fa ry zareo no diso ary nosafidiany ny tokony hanontaniana ny governemanta amin'ny lalana tokony arahina.
“Ahiana ny mety isian'ny faharavana tanteraka. Iray amin'ny toerana ahitana karazam-biby sy zavamaniry betsaka indrindra i Madagasikara.” –Pete Lowry
Na dia mahavory ny vola aza ny manampahaizana, dia tsy misy ny antoka fa hahomby ilay hetsika fandringanana. Saingy milaz aireo manampahaizana ireo fa hiteraka voka-dratsy kokoa ny tsy fandraisana andraikitra.
“Tsy haiko sainina ny ahafahan'ireo mpanapa-kevitra amin'ny fitantanana an'i Madagasikara matory amin'ny alina ary miteny fotsiny hoe, ‘Azafady, lafo loatra aminay ilay izy raha hiatrika an'io izahay. Efa tsy voafehy intsony ny toe-draharaha,’” hoy i Pete Lowry, mpandalina ny zavamananaina ao amin'ny Missouri Botanical Garden ary mpikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanan'i Madagascar Fauna and Flora Group, izay mandray anjara amin'ny fandrindrana ny ezaka fandringanana. “Ahiana ny mety isian'ny faharavana tanteraka. Iray amin'ny toerana ahitana karazam-biby sy zavamaniry betsaka indrindra i Madagasikara.” Manodidina ny 70 isanjaton'ny karazam-biby sy zavamaniry 250000 eto no tsy miaina afa-tsy eto manerana izao tontolo izao.
Namoaka tatitry ny fahafaha-manatanteraka mijoro mazava tsara ny vondrona tamin'ny fiandohan'ity taona ity. “Ny famongorana ihany no safidy tokana manana ny teboka farany,” hoy ny fanazavan'ny tatitra. “Ny vahaolana hafa rehetra dia mila famahana ny olana isan'andro mandrakizay.”
Manana fiakony manokana izo fandrahonana izao noho izay nitranga tany amin'ny 8800 kilaometatra any Aostralia izay nanomboka tamin'ny taona 1935, raha naondran'ny mpamboly fary avy any Hawaii ho ao ny radàkam-pary miisa 100 tao anatin'ny fanantenana hifehezana ny voangory mpanimba ny vokatr'izy ireo. Tafandositra ireo radàka, niely nanerana ny faritra maro tamin'ny kaontinanta ary niteraka fihenan'isan'ny biby mpiremby izay maty noho ny fihinanana azy ireny. Any amin'ny fonenam-biby maro, nandray anjara tamin'ny fihenan'isan'ny androngo sy ny karazana kangoroa tahaka ny quoll, izay biby mpiremby eo an-tampon'ny rojon-tsakafo mamelona ny rafi-piainana ao Aostralia ireo radàkam-pary ireo. Valopolo taona izay no lasa, mbola miezaka amin'ny fifehezana ireo sahna ireo hatrany ny Aostraliana. Mandrafitra fefy manakana ny sahona tsy ho tafiditra amin'ny toeram-panatodizana hatramin'izao ny manampahaizana sy mandraraka fanafody mamandrika ny tsiboboka. Afa-mahazo teboka amin'ny visa mihitsy aza ireo mpitety tany mpibaby entana raha manampy amin'ny fiadiana ny fielezan'ny sahona.
Laharam-pahamehana ity raharaha ity eto Madagasikara satria heverin'ny siantifika fa hiely haingana dia haingana ireto radàka ireto.
Mety handravarava tahaka ireo radàkam-pary tany Aostralia ihany koa ireto radàka aziatika tafiditra tamin'ny alalan'ny sambo mpitondra fiatibe (kaontenera) indostirialy toy ny mpandeha an-tsokosoko teto Madagasikara ireto, araka an'i James Reardon, mpandinika ny biby ao amin'ny Departemantam-pitehirizan'i New Zealand sady mpiara-manoratra ny tatitra. “Fantatro mazava tsara fa raha afa-miverina any amin'ny fotoana mbola voafetra tamin'ny faritra kelikely any Aostralia ny radàkam-pary — tahaka ny zavamisy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara — dia ho natorakay avokoa ny zava-drehetra niezahana nanaovana ny fandringanana,” hoy ny filazany.
Ahiana ho henjana ny vokany
Vaindohan-draharaha izy ity eto Madagasikara satria heverin'ny manampahaizana fa hiely haingana dia haingana ireto sahona ireto. Amin'izay fotoana izao ry zareo dia ao anatin'ny velaran-tany mirefy 120 kilaometatra toradroa akaikin'ny lakandranon'i Pangalana, izay fantsona sahaza tsara ireto bibin-drano an-tanety ireto hihazakazaka manerana ny faritra atsinanan'ny nosy.
Manahy mafy i Patricia Wright, manampahaizana momba ny varika avy ao amin'ny Oniversite Stony Brook fa hanavatsava ny lakandrano mandrapahatonga ao an-tanànan'i Mananjary ireto sahona ireto ary dia hiakatra an-tanety anatiny hahazo ny Valanjavaboarim-Pirenena ao Ranomafana, izay toeram-pitodian'ny karazam-biby sy zavamaniry maro izay noezahiny arovana nandritra ny telopolo taona mihoatra izao. Mety efa tonga ao amin'ny tetezan-drano kely mitondra mankany amin'ny lakandrano izao ireo sahona raha ny fanahian'ireo siantifika. Ny famelana ireo sahona ireo hahatratra ny lakandrano lehibe “dia tahaka ny manangana lalana haingam-pandeha ho azy ireo hizotra amin'ny faritra hafa manerana ny firenena,” hoy i Christopher Raxworthy, mpandinika ny momba ny sahona sy ny biby mahay rano sady an-tanety ao amin'ny Mozean'ny Tantaran'ny Natiora Amerikana.
Tsy ahitana radàka misy poizina hafa ny nosy, ka mety hampisy fandravaravana eo amin'ny biby mpiremby sy atao remby ny fahatongavam-biby vaovao tahaka itony, hoy ny fampitandreman'ny tatitra. Mety hihinana ity biby tsy mahazatra ity ka ho fatin'ny poiziny ny trandraka, biby fahita eto Madagasikara, raha mety hihaza ireo biby an-drano sady an-tanety sy sahona marevaka isan-karazany misy eto amin'ny nosy ity radàka aziatika tendan-kanina ity — tsy hita any an-toekan-kafa ny 99 isanjaton'ireo voalaza — ary mety hihinana tanalahy miendri-dravina na ireo karazam-biby vao teraka ireo radàka ireo, hoy i Raxworthy.
Tena mety hitranga tokoa ny fandrahonana amin'ny olona. Narary ireo ankizy tao Laos, ary fahafahakeliny nisy iray maty tamin'ny fihinanana ilay radàka aziatika, ary mety ho betsaka kokoa ny erijika ho an'ny Malagasy izay tsy zatra ity radàka ity. Nilaza ihany koa ny tatitra fa matin'ny fihinanana ity radàka ity ny bibilava, ny fihenan'isan'ireo anefa no mety hiteraka fitroaran'isan'ny voalavo mainty, ary ny fahamaroan'ny voalavo dia mety hiteraka olana ara-panadiovana ho an'ny firenena iray izay efa miady amin'ny pesta.
Manana antony lehibe anankitelo anantenana ahafaha-mandringana ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana ny siantifika. Voalohany, Tsy ahitana karazam-biby teratany izay mety ho tratran'ny fandringanana ao amin'ny faritra tratrany. Faharoa, mivory manodidina rano miandrona amin'ny alina ny radàka lahy miantso radàka vavy, koa misy noho izany ny toerana mety tsara hisamborana na hamonoana azy ireny. Farany, fanandramana natao vao haingana no nahitana fa mamono ny radàka amin'ny alalan'ny tsy fisian-drano amin'ny vatany haingana nefa tsy manohintohina biby hafa ny famendrahana asida sitirìka — amin'ny rihitra mitovy amin'ny ranom-boasarimakirana , araka ny filazan'i Raxworthy — .
Amin'ny filazana ny rafitra ankehitriny ho “roulette-ntontolo iainana” noho ny tsy fisian'ny lalàna, dia nanoratra i Carlton, fa “tokony hiantoka bebe kokoa amin'ny vola lany amin'ny fisorohana, fanaraha-maso ary amin'ny fikarohana ireo orinasa manana anjara toerana lehibe amin'ny mety fitondrana (tsy nahy) amin'ny alalan'ny sambo ireo karazam-biby sy zavamaniry tsy teratany.”
Ny dingana manaraka indray, dia manantena hanao karazana “fandringanana kelikely velarana” amin'ny faritra atsimo tratran'ny radàka ireo mpikambana ao amin'ny vondrona miasa, mba ahafahana mampihena ny fielezan'ny radàka mankany amin'ny lakandrano ary avy eo hatsaraina ny fomba famonoana. Saingy na dia izany ezaka madinika izany aza dia mitentina 400.000 dolara amerikana, ary mbola mitady vatsy ho amin'izany ny manampahaizana.
“Miasa amin'ny alalan'ny tetibola tery dia tery izahay,” hoy i Reardon. “Karazana bemiraim-panomezana avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpikajy ny tontolo iainana iraisampirenena izany.”
Izay no mahatonga ny fanontaniana: Iza no tokony handoa amin'ny fifehezana itony karazam-biby mpanani-bohitra tahaka itony sahona aziatika eto Madagasikara itony?
Entina hilazana ny andraikitry ny orinasa, tian'ny siantifika ny manondro ny fitaterana ireo karazam-biby mpanani-bohitra ireo ho “fandotoana ara-javamananaina.” Fanadihadiana savaranonando iray notontosaina tamin'ny taona 1998 notarihan'i David Wilcove, izay mpahay tontolo iainana amin'izao fotoana izao ao Princeton, no manonona ireo karazam-biby sy zavamaniry maro loatra ho antony faharoa, aorian'ny fahaverezan'ny fonenana, mahalany tamingana biby aman-javamaniry nisy tao Etazonia.
James Carlton, mpandalina biby an-dranomasina ao amin'ny Williams College ao Massachusetts, no nanolo-kevitra fa tokony horaisina ny maodelin'ny fifehezana ireo karazam-biby na zavamaniry manohintohina voafaritra ao amin'ny “polluter pays”[firenena mpandoto]. Efa nampiasa ity rafitra ity ireo orinasan-tsolika hatramin'ny nisian'ny voina Exxon Valdez; rehefa mahazo rano ny fitehirizan-tsoliky ry zareo na manomboka mitroka solika amim-paikany ny fantson-dry zareo, mandoa cents vitsivitsy isaky ny barika ry zareo hamatsiana ny fanadiovana hatao rahatrizay. Saingy hatramin'izao, tsy mandoa sara tahaka izany ireo orinasa mety hitondra an-tsambo karazam-biby na zavamaniry, ka dia tsy misy ny vatsy hanaovana fifehezana na fandringanana. Amin'ny filazana ny rafitra ankehitriny ho “roulette-ntontolo iainana” noho ny tsy fisian'ny lalàna, dia nanoratra i Carlton, fa “tokony hiantoka bebe kokoa amin'ny vola lany amin'ny fisorohana, fanaraha-maso ary amin'ny fikarohana ireo orinasa manana anjara toerana lehibe amin'ny mety fitondrana (tsy nahy) amin'ny alalan'ny sambo ireo karazam-biby sy zavamaniry tsy teratany.”
Raha tsy misy ny rafitra mahasahana manontolo ity karazam-biby manani-bohitra ity, dia tsy maintsy manao ny asa sarotra dia sarotra mamaha ny olona isa-tranga ny manampahaizana.
Ireo manampahaizana avy ao amin'ny vondrona miasa [mpanao fikarohana] no manolo-kevitra fa mety ho ny orinasan'ny nikela sy kôbalta ao Ambatovy no nitondra tsinahy ny radaka teto Madagasikara tao amin'ny sambo lehibe mpitondra fiatibe (kontenera) iray. Nitondra fampitaovana sy kojakoja nankeo amin'ny faritra tratra hananganana fanadiovan-tsolika iray lehibe ny orinasa tokotokony ho tamin'ny fotoana noheverin'ny vondrona mpanao fikarohana fa nahatongavan'ny radàka voalohany.
Nilaza ny Sherritt International, ilay orinasam-pitrandrahana Kanadiana mitazona ny 40 isanjaton'Ambatovy ary miasa ao amin'ny toby, fa fiatibe (kaontenera) miisa 170.000 isan-taona no mandalo ny seranan-tsambon'i Toamasina, maro amin'ireo no avy ao Azia, ary latsaky ny 5 isanjato amin'io ihany no mifandraika amin'ny asam-pihariany. “Eo amin'ny famantarana fiatibe iray manokana na toeram-pampidirana fiatibe iray manokana, tena sarotra dia sarotra ny manao izany,” hoy i Scott Tabachnick, mpitondratenin'ny orinasa.
Na izany aza, nilaza i Reardon, mpandinika biby avy any New Zealand, fa tsy misy lanjany ny antontanisa avy amin'ny seranana satria tsy nivoaka avy ao amin'ny seranana ireo radaka ireo — ny marina aza dia mbola tsy nahatratra ny seranana akory ireo. (Saingy amin'ny fisian'ny lakandrano, manahy izy fa hahatratra tsy ho ela ny seranana fihaonan'ny fivezivezena anatiny sy iraisampirenena ireo radàka ireo, ka hitsanmbikina any amin'ny fiatibe hafa indray.)
“Tsy manana porofo mivaingana izahay, saingy azo heverina fa tonga teto Madagasikara avy amin'ny asan'Ambatovy ireo radàka ireo,” hoy i Reardon. Manana fifandraisana an-dalamby mivantana avy ao amin'ny seranana mankao amin'ny toby misy azy, ametrahana ireo fiatibe ireo ny orinasa.
Saingy tsy ho azo antoka ho fantatra velively ny fomba nahatongavan'ireo radàka, indrindra fa misy mpanafatra entana roa hafa koa ao amin'ny faritra: Malgapro, raharaham-barotra fanafarana sy fanondranana entana iray miorina ao anatin'ny faritra nitsofohan'ireo radaka ireo indrindra, sy ny SolCiment Callidu, orinasa iray miorina eo amin'ny manodidina.
Mihodina ny ora
“Avy amin'ny fijerin'ny fitantanana ny zavamanana aina eto Madagasikara sy ny fitantanana ity krizy ity, tsy mampiova na inona na inona ny fahafantarana izay nampiditra ny radaka teto,” hoy ny Lowry avy ao Missouri, izay manana toeran'ny fakan-kevitra ao amin'ireo vondron'ny manampahaizana ao Ambatovy. “Tsy ny mijery ivoho ka hilaza izay meloka ny zava-dehibe eto. Ny fotoana laniana hanaovana izany dia fotoana very tokony niasana amin'ity olana lehibe ity.”
“Hisy ny fotoana tsy ho vita intsony ny manao izany. Fa arakaraka ny ihemorana no tsy hahombiazana intsony. Tsy azo isalasalana fa kely dia kely sisa ny fotoana ho amin'izany.” –Jonathan Kolby
Tsy ijerena izay fisehon'ny olana, manantena ny Lowry fa ho ao anatin'ny vahaolana i Ambatovy. “Mihodina ny fotoana,” hoy izy. “Tokony hijoro sy hanomboka dieny izao ankehitriny izao izay rehetra manana andraisana anjara.
Taorian'ny fihaonana tamin'ny desambra, nandrisika ny orinasa “hitari-dalana” amin'ny ezaka fandringanana ireo radaka ireo ny vaomiera Lowry — vondrona manampahaizana iray hafa tsy miaraka amin'ilay manao tatitra fahafaha-mamita ny tetikasa —, hoy ny fiaiken'ny mpitondratenin'Ambatovy, Vony Ramahaleo, tao amin'ny imailaka iray. Saingy nanamarika ny orinasa fa efa mipetraka ao anatin'ny komity natsangana hisahana ity fananiham-bohitra ity, miaraka amin'ny minisitera ao amin'ny governemanta sy ireo orinasam-piarovana sy fikolokoloana ry zareo. “Satria efa nanendry komity hitarika ity ady ity ny governemantan'i Madagasikara, dia tsy ho afaka ny hisolo azy ireo izahay,” hoy ny nosoratan-dRamahaleo.
Mihantona ny ezaka fandringanana rehefa tsy misy ny fanomezana lehibe. Fa tian'ny mponina ao an-toerana ihany ny hanafoana ireo radàka ireo, izay antsoiny hoe radaka boka na radaka Dynatec (sahona avy ao amin'ny fanadiovan’ Ambatovy). Vao namoaka hira mitondra ny lohateny hoe Radaka Boka, miresaka ilay fananiham-bohitra ny Mikahely, tetikasa iray ao an-toerana avy amin'ny tarika mpihira malagasy Mika & Davis. Efa niara-niasa aza ny orinasam-pifandraisana telo misy ato amin'ny firenena, nametraka rafitra ahafahana mandefa hafatra an-tsoratra ahafahan'ny olona milaza ny toerana misy ireo radaka amin'ny fomba maimaim-poana.
Mbola manenina ihany i Kolby fa tsy nanatanteraka zavatra bebe tao anatin'ny roa taona nahitany voalohany ilay radaka. “Ankehitriny dia mbola ilaina ny miroso mankany amin'ny fandringanana,” hoy i Kolby. “Hisy ny fotoana tsy ho vita intsony ny manao izany. Fa arakaraka ny ihemorana no tsy hahombiazana intsony. Tsy azo isalasalana fa kely dia kely sisa ny fotoana ho amin'izany.”
Mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Ivontoeran'ny Fanomezam-baovao Arthur L. Carter ao amin'ny Oniversiten'i New York i Edward Carver. Nandany efa-taona teto Madagasikara niasana tamin'ny tetikasam-pampandrosoana sy fikolokoloana izy.
4 herinandro izayOseania